CSM II OPPORTUNITIES | NGOConnect
CSM II Opportunities
Below please find information on the following CSM II Opportunities:
1. Advocacy and Engagement Fund
2. Direct Action Fund
3. Women's Peace Fund
4. Public Information Fund
Advancing Transition to Peaceful Democracy Through Participation of Civil Society and Media (CSM-II) isafive-year, $25 million, USAID-funded project implemented by FHI 360 and its partners Internews, Public International Law & Policy Group (PILPG), and Voluntary Service Overseas (VSO). CSM II works to promote the participation of civil society and independent media in strengthening democratic governance, intercommunal harmony and religious freedom to advance the transition to peaceful and inclusive democracy in Myanmar.
CSM II hereby announcesacall for proposals under its Annual Program Statement (APS). Through this Annual Program Statement APS, CSM II is calling for applications for grants from CSOs and independent local media organizations in Myanmar. The APS aims to address many of the concerns and issues raised by CSOs and independent media organizations during one-on-one consultations, and draws on the findings of analyses conducted by FHI 360 and experience from CSM I.
The APS is open through July 31, 2019.
To download the APS with application instructions and forms, please click here https://themimu.info/sites/themimu.info/files/call-for-proposals/AEF_1.zip
USAID’s Advancing Transition to Peaceful Democracy Through Participation of Civil Society and Media Project (CSM II), implemented by FHI 360, announces the availability of support for short-term actions by individuals or organizations from civil society and media in Myanmar. The Direct Action Fund (DAF) can pay for qualifying applicants to undertake travel, launch communications, or hold events to support activities related to areas of legal and policy reform, intercommunal harmony and religious freedom, and peace and national reconciliation. Examples include attendingaconference or negotiation, holding stakeholder workshops, broadcastingapublic service message, or meeting with government representatives and Ethnic Armed Organizations to advocate for change. CSM II prioritizes inclusion across the areas mentioned above and encourages women and girls; people with disabilities (PWDs); youth, ethnic, and religious minorities; and lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex (LGBTI) individuals to apply for DAF.
Note: The DAF is notagrants fund and does not provide for cash payments to individuals or organizations. Instead, CSM II will pay travel, communications and event costs directly, on behalf of qualifying applicants.
Those who are interested should send an email to Ops_Myanmar@fhi360.org at least two weeks in advance of the event or activity in question. In certain circumstances CSM II can support activities onashorter timeline.
Emails should include: Applicant name, organization, the details of the travel, publication or event, the reason for the request, what the outcome of the activity will be, and the estimated cost.
Requests will be considered based on their relevance to legal and policy reform, intercommunal harmony and religious freedom, and peace and national reconciliation; the urgency or demonstrated need of the request; and the likelihood of impact.
If an applicant qualifies for support, FHI 360 will contact the applicant for further discussions beforeafinal decision is made.
All individuals and organizations which receive support under CSM II are first subject to background checks to ensure compliance with USAID rules and regulations.
တိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးမှုရန်ပုံငွေ Direct Action Fund
အမေရိကန် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ USAID ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် FHI 360 မှ အကောင်အထည်ဖော်သည့် အရပ်ဖက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းနှင့် မီဒီယာတို့ ပါဝင်ခြင်းအားဖြင့် ငြိမ်းချမ်းသော ဒီမိုကရေစီသို့ ဆက်လက်ကူးပြောင်းခြင်း (CSM II) စီမံချက် သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့် မီဒီယာလောကမှ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကာလတိုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများကို ထောက်ပံ့ရန် ရန်ပုံငွေတစ်ခုကို ကြေညာလိုက်ပါသည်။ အဆိုပါ “တိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးမှုရန်ပုံငွေ Direct Action Fund (DAF)” က ဥပဒေနှင့် မူဝါဒပြုပြုပြောင်းလဲရေး၊ လူထုအသိုက်အဝန်းအတွင်း သဟဇာတဖြစ်ရေး၊ ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့် မြှင့်တင်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး တို့နှင့် သက်ဆိုင်သော ခရီးသွားလာမှု၊ စာအုပ်စာစောင် ထုတ်ဝေမိတ်ဆက်မှု၊ အစည်းအဝေး/အခမ်းအနား ကျင်းပမှု ကုန်ကျစရိတ်များကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ကျခံပေးနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအချို့ဆိုရသော် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးအတွက် ညီလာခံ တက်ရောက်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်သူများနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာ သတင်း အချက်အလက် ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် ပြုပြုင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် တိုက်တွန်းဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း။ CSM II စီမံချက်က အထက်ပါ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များ အားလုံးတွင် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ရေးကို ဦးစားပေးသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ၊ မိန်းကလေးများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ လူငယ်များ၊ တိုင်းရင်းသား/ ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ လူနည်းစုများ၊ လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှု ကွဲပြားသူ (LGBTI)များအနေဖြင့် DAF ကို လျှောက်ထားကြရန် အားပေးလိုပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ DAF သည် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ငွေကြေးပေးအပ်မည် မဟုတ်ပါ။ CSM II စီမံချက်သည် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသူများ၏ ကိုယ်စား ခရီးစရိတ်၊ ဆက်သွယ်ရေးစရိတ်၊ စည်းဝေးပွဲကုန်ကျစရိတ် စသည်တို့ကို တိုက်ရိုက်ပေးချေပါမည်။
စိတ်ပါဝင်စားသူများသည် သက်ဆိုင်ရာ ပွဲ/လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (activity)မတိုင်မီ အနည်းဆုံး ၂ ပတ်ကြိုတင်၍ ဤလိပ်စာသို့ အီးမေးရေးသားရပါမည် Ops_Myanmar@fhi360.org အချို့သော အခြေအနေများတွင် ၂ ပတ်ထက် ပိုစော၍ ပံ့ပိုးနိုင်ပါသည်။
အီးမေးရေးသားရာတွင် အောက်ပါအချက်အလက်များ ပါဝင်ရပါမည် - လျှောက်ထားသူ၏ အမည်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ လုပ်ဆောင်မည့် ခရီး/ထုတ်ဝေမှု/ အစည်းအဝေး စသည်တို့၏ အသေးစိတ် ဖော်ပြချက်၊ လျှောက်ထားရသည့် အကြောင်းရင်း၊ ၎င်းလုပ်ငန်းအစီအစဉ်၏ မျှော်မှန်းရလဒ်၊ ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်။
လျှောက်ထားသူများကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ စိစစ်ရွေးချယ်ရာတွင် ဥပဒေ မူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊ လူ့အသိုက်အဝန်းအကြား သဟဇာတဖြစ်ရေး နှင့် ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးတို့အတွက် အရေးပါမှုကိုလည်းကောင်း၊ အဆိုပါလျှောက်ထားသည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်သည် အရေးတကြီး အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက် ဖြစ်မဖြစ်ကိုလည်းကောင်း၊ အကျိုး သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်သည့် အလားအလာကိုလည်းကောင်း အခြေခံကာ စဉ်းစားသွားပါမည်။
လျှောက်ထားသူသည် ဤပံ့ပိုးမှုအတွက် အထက်ပါသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီပါက ထိုသူအား FHI 360 မှ ဆက်သွယ်ကာ ဆွေးနွေးပြီးမှ အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။
CSM II စီမံချက်တွင် ပံ့ပိုးမှုလက်ခံသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကို USAID စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီစေရန်အတွက် ပထမဦးစွာ အချက်အလက်စစ်ဆေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
3. Women's Peace Fund (WPF) for Greater Inclusion in the Peace Process
USAID’s Advancing Transition to Peaceful Democracy Through Participation of Civil Society and Media Project (CSM II), implemented by FHI 360, announces the availability of support for women’s participation in peace processes. The Women’s Peace Fund (WPF) can pay for qualifying applicants to undertake travel, communications, meetings, child-care assistance and other activities related to Myanmar’s Peace Processes. Examples include attending National Dialogues, peace negotiations, women’s forums and advocacy meetings with key stakeholders (Government representatives and Ethnic Armed Organizations) etc.
Note: The WPF is notagrants fund and does not provide for cash payments to individuals or organizations. Instead, CSM II will pay travel (international travel will be considered onacase by case basis), communications and event costs directly, on behalf of qualifying applicants.
Those who are interested should send an email to Ops_Myanmar@fhi360.org at least two weeks in advance of the event or activities. In certain circumstances CSM II can support activities onashorter timeline.
Requests will be considered based on their relevance to peace and national reconciliation; the urgency or demonstrated need of the request; and the likelihood of impact.
အမျိုးသမီးများအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး ရန်ပုံငွေ (WPF)
အမေရိကန် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ USAID ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့် FHI360 မှအကောင်အထည်ဖော်သည့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့် မီဒီယာတို့ ပါဝင်ခြင်းအားဖြင့် ငြိမ်းချမ်းသော ဒီမိုကရေစီသို့ ဆက်လက်ကူးပြောင်းခြင်း (CSM II) စီမံချက်မှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ ငြိမ်းချမ်းရေးတွင်ပါဝင်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက် ထောက်ပံ့မည့်အစီအစဉ်တစ်ခုကို ကြေငြာလိုက်ပါသည်။
အမျိုးသမီးများအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးရံပုံငွေ (WPF) သည် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသူများအား ခရီးသွားလာမှု၊ ဆက်သွယ်ရေးစရိတ်၊ အစည်းအဝေးပွဲများ၊ ကလေးငယ်များခေါ်ဆောင်လာရန်လိုအပ်သောမိခင်များအတွက် အထောက်အပံ့ပေးခြင်း (ဥပမာ - ကလေးထိန်းအတွက်စရိတ်ထောက်ပံ့ခြင်း) နှင့် အခြားသော မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို ကျခံပေးနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများ တက်ရောက်ခြင်း၊ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးအတွက် ညီလာခံ တက်ရောက်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးငြိမ်းချမ်းရေးဖိုရမ် တက်ရောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များ (သို့) တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံ/စည်းဝေးခြင်း။
မှတ်ချက်။ ။ WPF သည် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ငွေကြေးပေးအပ်မည် မဟုတ်ပါ။ CSM II စီမံချက်သည် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသူများ၏ ကိုယ်စား ခရီးစရိတ်၊ ဆက်သွယ်ရေးစရိတ်၊ စည်းဝေးပွဲကုန်ကျစရိတ် စသည်တို့ကို တိုက်ရိုက်ပေးချေပါမည်။
လျှောက်ထားသူများကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ စိစစ်ရွေးချယ်ရာတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးတို့အတွက်အရေးပါမှု၊ အမှန်တကယ်အရေးတကြီး လိုအပ်ချက် ရှိ၊ မရှိနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည့် အလားအလာအပေါ် အခြေခံကာ စဉ်းစားသွားပါမည်။
CSM II hereby announces an Annual Program Statement (APS) calling for applications for grants from independent local media organizations and civil society organizations in Myanmar. Grants provided under this APS will support high-quality reporting, media development, access to quality and accurate information, and awareness building in the following areas:
The APS is open through August 31, 2019.
To download the APS with application instructions and forms, please click here http://themimu.info/sites/themimu.info/files/call-for-proposals/APS_PIF.zip.